Wasiir Xaaji “Waan sii wadeynaa qoridda dhalinyarada ku biireysa ciidamada” | Dhacdo
Home Wararka Maanta Wasiir Xaaji “Waan sii wadeynaa qoridda dhalinyarada ku biireysa ciidamada”
Wasiir Xaaji “Waan sii wadeynaa qoridda dhalinyarada ku biireysa ciidamada”
“Waxaan xanuunka la wadaagayaa shacabka Soomaaliyeed iyo dhalinyarada go’aansatay inay Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed ku biiraan oo dalkooda u adeegaan, oo ay maanta argagixisadda ku xasuuqeen goob ka baxsan halkii lagu diiwaangelinyay.” Ayuu yiri Wasiirka.
“Argagixisada uma kala soocna shacabka Soomaaliyeed, waxaana ugu baaqayaa shacabkeenna sharafta leh in ay dowladooda ku garab siiyaan dagaalka ay kula jirto argagixisada aan arxanka laheen.” Ayuu yiri Wasiirku.
Wasiirka oo bogaadinayay Ciidanka Xoogga Dalka iyo dhalinyarada ku biireysa ciidamada ayaa wuxuu yiri “Waxaan geesiyaasha u heelan difaaca dalkooda iyo dhalinyarada waxbaratay ee ku dhiiratay in ciidanka ay ku biiraan leeyahay waa sababta aad u go’aansateen in dalkiina aad ka difaacdaan cadowga. Qarankiina iyo shacabkiina marna ma ilaabi doonaan abaalkiina.”
Previous articleDhalinyarada ka mid noqonaysa Gorgor oo goob ammaan ah loo wareejiyay
Next articleXaaladda Xerada General Dhega-badan, ka dib weerarkii isqarxinta (SAWIRRO)